Zvimwe zvinhu zvinotora nguva. Gara uine mwoyo murefu uye gara uine tariro, zvinhu zvichawedzera kuita zvakanaka. - Anotungamira - Quotes Pedia
Inoti rwizi runochekerera padombo kwete nekuda kwesimba raro, asi nekuda kwekutsungirira kwayo. Izvi zvinoreva kuti isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu uye nekupokana nekuyedza uye, panguva imwecheteyo, kuzvvandudza pachedu nhanho nhanho nenguva kuti tisvike chinangwa chedu chekuda
Mumwe anogona kufunga kuti "Ndiri kusaririra kumashure pane mumwe wandinokwikwidza naye", asi chaizvo, handizvo zvazviri. Isu takavakwa nezvedu zvakanaka uye zvakaipa zviito. Wese munhu ane wachi yakasiyana, yemunhu wese mamiriro eTinging akasiyana zvachose neiyo imwe, uye inosungirwa kuitika muNyika ine huwandu hwakakura hwevanhu, tsika nemitauro.
Kune kusiyanisa kwakasiyana muhupenyu hwenyaya yehupenyu, imwe neimwe inyanzvi, kana tikapa kuedza kuvanzwisisa. Inoti izvo zvinouya gare gare zvinogara zvakanaka. Izvi ndizvo chaizvo zvekuti kana zvinhu zvikangowira munzvimbo yavo chaiyo, tinoita kuti vheneke zvakanyanya.
Nekudaro, zvakakosha kuti tizvipe nguva, nguva chete ndiyo chinhu chimwe chete chepasi rino chinoporesa zvese zvisinganzwisisike zviri kuitika. Iine simba rakakwana rekuporesa. Kungori mashiripiti kana zvinhu zvawira munzvimbo panguva chaiyo, mune chaiyo mamiriro, uye tinogona kupedzisira toti zuva iro kuti hongu, takazviita.
Tinofanira kuziva kuti kutadza hakugumi, uye kubudirira hakuna zvekare. Mumwe anoenderera mberi achiedza kuzvimisikidza zuva nezuva kuti ave nani, ave shomani, ave nesimba. Kuvandudza nenguva uye kuva nekutenda mukati meyemukati mega ndiwo musimboti wehukuru.
Munyika yemari inoshanduka, shanduko yega ndiyo chinhu chisingagoneki chisingadzivisiki. Vimba naMwari uye uzvitende. Zvimwe zvinhu zvinongotora nguva kuzvishandura kuva munhu ane ruzivo uye ane hunyanzvi ane hunyanzvi.
Nguva inoumbika munhu. Zvinokuedza paruzhinji, zvinokunyadzisa paruzhinji, asi zvinokupa mubayiro zvakavanzika. Nenguva iyo anorasikirwa anogona kuzviratidza kuti anogadzira mumunda wake uye kuita zvinoshamisa mumabasa ake.
Zvitadzo Zvekuve Nemwoyo murefu
Gara Pfungwa Dzine Tsitsi
Daro rakaipisisa pakati pevanhu vaviri kusanzwisisana. - Asingazivikanwe
Chinhambwe chakanyanya pakati pevanhu vaviri hachiverengwi mumamaira, asi kusanzwisisa ndiko kunodhonza maviri…
Zvinhu zviviri zvinotsanangudza iwe: Kushivirira kwako kana usina chinhu uye maitiro ako kana uine zvese. - Asingazivikanwe
Hupenyu hunotipa matambudziko aro nezvipo. Zvinoita kuti rwendo rwedu ruve rwakanaka. Kuburikidza nezvose izvi, zvedu…
Rudo runofanira kukuporesa kwete kukukuvadza. - Asingazivikanwe
Rudo nderumwe rwehunhu hwakakurumbira uye hwakanaka hwevanhu. Icho chinhu chinoita kuti vanhu…
Zviite nekuti vakati haugone. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana: